Translate Hausa to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Hausa to Myanmar (Burmese), Hausa to Myanmar (Burmese) translations, Hausa to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Sannu, ta yaya kuke မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Akwai wani? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Ina ƙaunar ku sosai ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Nawa ne wannan hamburger ya biya? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Zaaiya kiran ni taksi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Yi hankuri ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Yi mani uzuri တဆိတ်လောက်
Ina sha'awar ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
An yi jinkiri na gudu အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Ina nan don kasuwanci ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Sannu, sunana ne မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Yi hakuri, amma na yi aure ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Ina so in tambaye ku ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Zaaiya kai ni filin jirgin sama? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Menene lokaciayanzu, don Allah? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Ina ofishin 'yan sanda yakeanan kusa? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Zan iya saya caja wayarka don Allah? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Za'a iya taya ni? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Ku bani abin sha, don Allah? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Nawa ne kudin? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ina rashin rashin lafiyar bara ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Kira likita ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Akwai likita? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Zan iya samun kira? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Kira mana manajan ku don Allah. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Wannan wuri yana da kyau ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Ku kai ni hotel din don Allah ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Menene lambar dakin na? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?